ဘဝမှတ်တိုင်: ဗလရှိဖို့ မလိုပါဘူး …. “ဇ”ရှိဖို့ ပဲ လိုတယ်
ဗလရှိဖို့ မလိုပါဘူး …. “ဇ”ရှိဖို့ ပဲ လိုတယ်ဆိုတဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာသော“ဇ”သတင်းApplication
(Credit To Mobile & Software Play)
(MINGJI NEWS – Android News Offline Reader).apk
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ Android User များအတွက် ရည်ရွယ်၍ MINGJI PLAY မှ “ဇ”သတင်း (MINGJI NEWS – Android News Offline Reader).apk ကို ပြုလုပ်ဖြန့် ချီလိုက်ပါသည်။
“ဇ” သတင်း (MINGJI NEWS – Android News Offline Reader).apk တွင် နေ့ စဉ် Update ဖြစ်သောသတင်းဌာန၊မီဒီယာ (၂၈)ခု ကို ထည့်သွင်းထားပြီး ကဏ္ဍစုံသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖတ်ရှုနိုင်မည့်
Android News Offline Reader တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
“ဇ” သတင်း (MINGJI NEWS – Android News Offline Reader).apk တွင် ထည့်သွင်းထားသောသတင်းဌာန၊မီဒီယာများမှာ-
(၁) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၂) ပြည်သူ့ လွှတ်တော် (၃) သစ်ထူးလွင် (၄) Myanmar Express (၅)
ဧရာဝတီ (၆) Mizzima Daily News (၇) Narinjara Online 24 X7(၈) မြစ်မခ
မီဒီယာဂရု(ပ်) (၉)The Voice Weekly (၁၀) မိုးမခ (၁၁) လေးမြို့ သတင်းမီဒီယာ (၁၂) 7Day News Journal (၁၃)International News for Myanmar (၁၄) RFA မြန်မာပိုင်း (၁၅) VOA မြန်မာပိုင်း (၁၆) DVB (၁၇)မြန်မာနေ့ စဉ်သတင်း (၁၈) ၀င်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ) (၁၉) မောင်ပေါက် (နည်းပညာ) (၂၀)OppositEyE (၂၁) Myanmar Journal Download (၂၂) မင်းကြီး PLAY (၂၃) Myanmar Model
Girls (၂၄) Myanmar Model Girls Photo Gallery (၂၅) မြန်မာ E-books (၂၆) မြန်မာ MP3 Download (၂၇) “ဇ” သတင်း (MINGJI NEWS) (၂၈) Myanmar Model Girl’s Photos တို့ ဖြစ်ပြီးမကြာမီအတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ် Update ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
-“ဇ”သတင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော RSS Feed သည် အမှန်တကယ် Daily Update ဖြစ်သောသတင်းဌာန၊မီဒီယာများကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှ ပေါင်းထည့်ထားခြင်း ။
-ဒေသတွင်းသတင်းဌာန၊မီဒီယာများကိုပါ ပေါင်းထည့်ထားခြင်း ။
-သုတ၊ရသများကို သာမက စာပေကဏ္ဍ ၊ သီချင်းကဏ္ဍ ၊ နည်းပညာများကိုပါ ပေါင်းထည့်ထားခြင်း။
-အမှန်တကယ် Update ဖြစ်သော မီဒီယာများကိုသာ ပေါင်းထည့်ထားသဖြင့် အချိန်အကြာကြီး Download ဖေါင်းပွမှုကို
သက်သာစေပြီး အချိန်တိုအတွင်း မြန်ဆန်စွာ သတင်း Downloaded ပြီးမြောက်စေနိုင်ပါတယ်။
အောက်က အဆင်ပြေရာ လင့်ခ် များမှ ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင် ပါပြီ။
Credit by ကိုဇော်သွင်(နည်းပညာ)
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/24/2013 08:25:00 pm